Madaxweyne Muuse Biixi Oo Talaabo La Yaableh Qaaday, Casuumad Uu Gurigiisa Ku Sameeyey Iyo Ujeedada Uu Ka Lahaa
Friday July 12, 2019 - 19:39:46 in News by G. Good
Hargeysa(HWN):-Madaxweyne Biixi ayaa maanta gurigiisa ku sameeyay casuumad nooceedu ku cusub yahay madaxda somaliland oo kulmisay xubno ka mid ah haldoorka shacabka.
Madaxweyne Muuse Biixi ayaa casuumada ku soo martiqaaday odayaal iyo haldoor ka soo kala jeeda guud ahaan beelaha somaliland kuwaas oo qaarkood ka yimaadeen gobolada dalka.
Waxyaabaha layaabka leh ee xubnihii ka qayb qaatay casuumadi ay ku arkeen madashii lagu martiqaaday ayaa ahayd in madaxweyne Muuse Biixi uu beel walba ka soo casuumay 20 qof taas oo dareen gaar ah u yeeshay madasha.
Sidoo kale qisada la yaabka leh ayaa ahayd inaanay is ogayn odoyaasha iyo haldoorka lagu soo casuumay madasha iyada oo beel walba dhankeeda u filanaysay inuu kulan gaar ah la yeelanayo Madaxweynuhu, balse waxa ay arinti is badashay markii ay madasha martiqaadka madaxweyne Muuse iskugu keenay Wajiyo badan oo caan ah oo ka soo kala jeeda beelaha Somaliland.
Wararka bulshadu isla dhexmaraysay ayaa sheegayey in madaxweyne Muuse Biixi uu kulan gaar ah la qaadanayo waxgaradka beel ka mid ah kuwa dega gobolka Saaxil kuwaasi oo ubadnaa dhinaca martiqaadka loo sooryeeyay.
Si kastaba ha noqotee, Ujeedada Qadadan maanta uu Sameeyay Madaxweyne Biixi ayaa lagu sheegay mid loogu ducaynayay Arooska wiil uu dhalay Madaxweyne Biixi oo lagu magacaabo Maxamed Muuse Biixi oo Todobaadkan ka dhacday Dalka Jabuuti.